काभ्रेमा माधब समूहले किन एमाले पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्न उर्दी जारी गर्यो ? – मिलिजुली खबर
काभ्रेमा माधब समूहले किन एमाले पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्न उर्दी जारी गर्यो ?
एमाले काभ्रेको असार २३ गते जिल्ला कमिटी बैठक बस्यो । बैठकले पार्टी सदस्यताको बिषयमा एउटा मात्रै निर्णय गरेको थियो । सदस्यता नवीकरण गर्ने र नयाँ सदस्य वितरण गर्ने । ६ बर्षको लेबी मध्य ३ बर्षको मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साविक एमालेको जिल्ला कमिटीमा अहिले ६२ सदस्य छन् । जसमा अध्यक्ष टोक बहादुर वाईबा, उपाध्यक्षमा उठेर हारेका जिल्ला कमिटी सदस्य मुकुन्द गौतम र जिल्ला सदस्य बसुन्धरा हुमागाईं मात्रै माधव समूहमा छन् । ५९ जना ओली समूहका सदस्य छन् ।
असार २३ गतेको बैठकपछि भने एमाले काभ्रेको जिल्ला कमिटी ७२ जनाको बनेको छ । जसमा माओवादीबाट १० जना जिल्ला कमिटी सदस्य समाहित भएका छन् । त्यो बैठकमा माधब नेपाल समूहका एक जना उपस्थिति भएका थिएनन् ।
१० हजार ९ सय क्रियाशिल सदस्य रहेका छन् । जिल्लाको १३५ वटै वडाहरूमा सदस्य नवीकरण र नयाँ सदस्य वितरण गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकको निर्णय लगत्तै अहिले जिल्लाका धेरै स्थानीय तहमा सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरणको काम धमाधम चलिरहेको छ ।
आफुहरू सहभागी नभएको बैकठले गरेको निर्णय मान्य नहुँने भन्दै एमाले माधव समूहका जिल्ला उपाध्यक्ष बसुन्धरा हुमागाईले ‘माधब नेपाल समूहमा लाग्ने कुनै पनि नेता, कार्यकर्तालाई सदस्यता नवीकरण नगर्न र नगराउन’ आग्रह गर्नुभयो ।
काभ्रे निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेश (ख) बाट निर्वाचित सांसद समेत रहनुभएका उपाध्यक्ष हुमागाईंले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ: ‘हामी माधब नेपाल समुहका नेता कार्यकर्ता अन्तिम सम्म पार्टी एकता पक्षमा छौ । पार्टी सदस्यता नेपाल समूहमा लाग्नेले अहिले सदस्यता नवीकरण नगर्न र नगराउन अनुरोध छ ।’
जिल्ला कमिटीमा ओली समूहको स्पष्ट बहुमत भएपनि सांगठनिक रूपमा माधब नेपाल समूह पनि उत्तिकै बलियो छ । मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा ओली समूहलाई संगठन सुदृढीकरण गर्न निकै सकस भैरहेको छ । मण्डनदेउपुर नगरपालिका एमाले नवौँ जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष टोक बहादुर वाईबाको राम्रो पकट छ ।
वाईबा जिल्लामा नेपाल समूहका शक्तिशाली नेताभित्र पर्नुहुन्छ । हुन् त मण्डनदेउपुर नगरपालिका पूर्व मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको घर र निर्वाचन क्षेत्र पनि हो । तर त्यहाँ बाँस्कोटा समूहले माधब समूहलाई सांगठनिक रूपमा भेटाउन निकै मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै ठूलो मतदाता संख्या रहेको पाँचखाल, बनेपा, पनौती, नमोबुद्ध, धुलिखेल नगरपालिकामा पनि माधव नेपाल समूहको उपस्थित राम्रो छ । त्यहि भएरपनि आफ्नो समूहमा लागेका कोही पनि नेता कार्यकर्तालाई भ्रममा परेर सदस्यता नवीकरण नगर्न र नगराउन माधब समूहले आग्रह गरेको हो ।
मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका सबै विद्यालय सञ्चालन
काभ्रेमा ९० जना निको भए, २२ जना थपिए